HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Isniin Ah 16 May
May 16, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Juventus ayaa wadahadalo cusub la yeelan doonta wakiilada khadka dhexe ee Manchester United iyo France Paul Pogba, oo 29 jir ah Isniinta maanta. (Mirror)
Aston Villa ayaa loolan ugu jirta saxiixa weeraryahanka reer Uruguay Luis Suarez, oo 35 jir ah, ka dib markii la sheegay inuu ka tagayo Atletico Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan. Laakiin Sevilla iyo Inter Milan ayaa sidoo kale doonaya. (Fichajes – Isbaanish)
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa si maldahan u sheegay inuu doonayo inuu Old Trafford ku sii hayo weeraryahanka Portugual Cristiano Ronaldo, oo 37 jir ah xilli ciyaareedka soo socda. (thesun)
Weeraryahanka France Kylian Mbappe, oo 23 jir ah, ayaa sheegay in uu ku dhawaaday in uu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa isla markaana uu ku dhawaaqi doono “dhakhso” ka dib markii lala xiriiriyay inuu ka tagayo Paris St-Germain . (getfootbaalnewsFrance)
Newcastle ayaa sii xoojisa xiisaha ay u qabto goolhayaha Manchester United iyo xulka England Dean Henderson, 25. (Mirror).
Newcastle ayaa xiisaynaysa weeraryahanka Reims Hugo Ekitike, oo 19 jir ah, laakiin Borussia Dortmund ayaa sidoo kale miisaamaysa xiddiga reer France si uu u noqdo badalka Erling Haaland. (Fabrizio Romano)
Barcelona ayaa u dhaqaaqeysa saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Wolves iyo xulka qaranka Portugal ee Ruben Neves oo 25 jir ah (Sport – in Spanish).
Liverpool ayaa safka hore kaga jirta saxiixa da’yarta Birmingham City ee Jobe Bellingham, oo 16 jir ah, waa walaalka ciyaaryahanka reer England Jude Bellingham. (Mirror)
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay iska iibiso daafaca dhexe ee Brazil Gabriel, oo 24 jir ah, iyadoo Juventus ay xiiseyneyso. (Tuttosport – Talyaani)
Kubad sameeyaha Denmark Christian Eriksen, oo 30 jir ah, oo haatan heshiis waqti gaaban ah kula jira Brentford , ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ciyaaro kubbadda cagta Champions League mar kale, isagoo miisaamaya mustaqbalkiisa xilli ciyaareedka soo socda. (Football365)
Maamulaha Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa qarka u saaran inuu la kulmo madaxweynaha kooxda Nasser Al-Khelaifi iyadoo la isla dhex marayo mustaqbalkiisa. (Marca – Isbaanish)
Madax waynaha Bayern Munich Uli Hoeness ayaa sheegay in weeraryahan Robert Lewandowski uu ku kalsoon yahay in 33 jirka reer Poland uu kooxda sii joogi doono xagaagan. (Kicker – Jarmal)